Blog - Idaacadaha Shabakadaha
by Caweyska Dalmar
Dashboard Dacaayad ah
0 € items 0
Bogga ugu weyn / blog
Brandmeister iyo TGIF isla mar ahaantaana Socda
Waan jeclahay isticmaalka my RFinder HCP-1 meel kulul meelkasta oo aan aado. Marka hore, maxaa yeelay waxaan si fudud u isticmaali karaa Brandmeister iyo TGIF Talkgroups aniga oo aan wax isbedel ah ka sameynin barta kulkulul iyo tan labaad, iyadoo ay ugu wacan tahay baytarigeeda gudahiisa, waan ku shaqeyn karaa wax ka badan 5 saacadood, iyadoo aan loo eegin meesha aan joogo - iyadoo la adeegsanayo isku xirka Wifi ee laga soo dhejiyay taleefankayga casriga ah. . Xitaa waxay u shaqeysaa sidii bangi awood, haddii aan u baahanahay xoogaa cabitaan xoog ah oo taleefankayga casriga ah.
Waxaan barnaamij ka samayn karaa 3 shabakadood oo kala duwan oo diyaar u ah in la isticmaalo Waxaan hayaa Brandmeister, TGIF (dhaxal) iyo TGIF (prime).
The RFinder HCP-1 kulkulul waa saldhigga 'PI-star', oo leh MMDVM. Waxa kaliya ee ay tahay inaad sameyso, waa inaad ugu barnaamijto sidii albaab DMR ah. Kadib, u tag Dejinta> Khabiir iyo guji Tafatir Buuxa> DMR GW.
Markaan rabo inaan isticmaalo Kooxda 'Brandmeister Talkgroup', kaliya waxaan isticmaalaa TG-ga caadiga ah. Waxaan ula jeedaa, anigu hadaan rabo inaan waco TG 91, kaliya waxaan isticmaalaa TG91.
Haddii aan doonayo inaan isticmaalo TGIF (Legacy) oo aan u baahdo inaan isticmaalo TG 777, waxaan garaacayaa TG5000777 Asal ahaan, waxaan u baahanahay inaan ku bilaabo '5', suufka '0' illaa aan ka helo wadarta 7 lambar.
Haddii aan doonayo inaan isticmaalo TGIF (Ra'iisul) una baahdo inaan isticmaalo TG 31039, waxaan garaacayaa TG4031039 Asal ahaan, waxaan u baahanahay inaan ku bilaabo '4', suufka '0' illaa aan ka helo wadar ahaan 7 lambar.
Waxa kaliya ee aan u baahanahay inaan sameeyo, waa inaan barnaamijkeyga idaacadda ah la kaashado TG-yada kala duwan. BM had iyo jeer waa iska caadi, TGIF Prime wuxuu ku bilaabmaa 4 iyo TGIF Legacy wuxuu ku bilaabmaa 5.
Tan waxaa sidoo kale loo isticmaali karaa shabakadaha DMR +. Had iyo jeer waa mabda 'isku mid ah.
Ku buuxi sida soo socota: (waxaad u baahan tahay inaad beddesho lambarka sirta ee Brandmeister iyo TGIF, Aqoonsiga DMR, iwm:
Cinwaanka Cinwaanka = 127.0.0.1
Cinwaanka Deegaanka = 127.0.0.1
Soo-saare = 0
Waqtiga NetTimeout = 20
FilePath = / var / log / pi-xiddig
Waa karti = 1
Luqad = en_GB
Tusaha = / usr / maxaliga / iwm / DMR_Audio
Waa karti = 0
Awood = 1
Latitude = SELECT_YOUR_LATITUDE
Longitude = -SELECT_YOUR_LONGITUDE
Dherer = 0
Goob = = Estoril ”
Sharaxaad = ”Boortaqiis”
Bilowga = 950
Fayl = / usr / maxalli / iwm / XLXHosts.txt
Deked = 62030
Afyare = 2
Saldhig = 64000
Relink = 60
Iid = ENTER_YOUR_DMR_ID
[Shabakada DMR 1]
Cinwaan = 193.137.237.12
Deked = 62031
Deegaanka = 62037
TG Dib u qoris0 = 2,9,2,9,1
Nooca Dib u qoris0 = 2,9990,2,9990
Furaha = = "ENTER_YOUR_PASSWORD"
Magaca = SELECT_YOUR_BM_MASTER
[Shabakada DMR 2]
Cinwaan = 168.235.109.210
Deked = 55555
TG Dib u qoris0 = 2,8,2,9,1
TG Dib u qoris1 = 2,80505,2,505,1
TG Dib u qoris2 = 2,80800,2,800,100
TG Dib u qoris3 = 2,83801,2,3801,8
TG Dib u qoris4 = 2,89990,2,9990,1
TG Dib u qoris5 = 2,80001,1,1,9999
TG Dib u qoris6 = 2,80001,2,1,9999
Password = ”PASSWORD”
Magaca = DMR + _IPSC2-QUADNET
[Shabakada DMR 3]
Magaca = TGIF_Network
Nooca Dib u qoris1 = 1,5009990,1,9990
Nooca Dib u qoris2 = 2,5009990,2,9990
TG Dib u qoris1 = 1,5000001,1,1,999999
TG Dib u qoris2 = 2,5000001,2,1,999999
Cinwaanka = shabakadda tgif
Password = ENTER_YOUR_TGIF_LEGACY_PASSWORD
Goobta = 0
[Shabakada DMR 4]
Magaca = TGIF_Network_Prime
Nooca Dib u qoris1 = 1,4009990,1,9990
Nooca Dib u qoris2 = 2,4009990,2,9990
TG Dib u qoris1 = 1,4000001,1,1,999999
TG Dib u qoris2 = 2,4000001,2,1,999999
Cinwaanka = prime.tgif.netka
Password = ENTER_YOUR_TGIF_PRIME_HOTSPOT_PASSWORD
Raadiyo Amateur, Howlgalka Zello
Waxaan ku faraxsanahay inaan ku dhawaaqno dib u eegis fiidiyow oo dhameystiran oo ah Boxchip S700A - Wareejiye isku dhafan oo ah DMR / Analog, oo wata Android OS oo awood u leh 4G / LTE. Waxaa lagu heli karaa noocyada VHF iyo UHF.
Dib-u-eegista fiidiyowgaan waxay ka kooban tahay qaabka UHF.
Waad jeclaan doontaa idaacadan waxaana kuu diyaarinay qiimo dhimis. Haddii aad isticmaasho lambarka xayeysiinta HRCDMR on baadhid waxaad heli doontaa qiimo dhimis dheeri ah iyo rar bilaash ah, meel kastoo aad ku nooshahay.
Fiidiyoow by HamRadioConcepts
Dalbo Boxchip-gaaga S700A Hadda
Dhageyso kanaallada Shabakadda Raadiyaha Tooska ah
Ma ku cusub tahay Idaacadaha Shabakadaha?
Ma jeceshahay inaad dhageysato isgaarsiinta tooska ah ee 'Zello' ka hor intaadan u dhaqaaqin iibsashada qaar ka mid ah raadiyeyaasha shabakadda?
Waa kuwan kanaalada rasmiga ah ee Idaacadaha Shabakadaha:
Sida loo barnaamijyo mawjadaha Boxchip S700A DMR
Fadlan iska hubi inaad Boxchip S700A wuxuu leeyahay awood batari ku filan marka hore.
1 xabbo oo ah nooca USB-ka ee Nooca-C iyo kumbuyuutar leh Windows 7 ama wixii ka sarreeya ayaa lagama maarmaan ah. Nooca Qaab-dhismeedka Shabakadda 'Net Framework' waa inuusan ka hooseyn 4.0.
ku rakib ah Xirmada rakibaadda BPS meel kasta oo aad rabto.
1.2 Sahlo ka bixida USB
Waxaan ubaahanahay inaan awood u siino USB Debugging qalabkaaga sababtoo ah BPS akhri oo ku qor faylasha habaynta adoo adeegsanaya USB. Waxaan awood u siin karnaa inay raacdo talaabooyinkan:
a) Awooda qalabka;
b) Xullo "Dejinta-> Telefoonka";
c) Guji "Buugga lambarka" 3 jeer si deg deg ah waxaadna arki doontaa caarad;
d) Dib ugu laabo "Dejinta", waxaa jira "xulasho horumarineed" oo ku qoran shayga kor ku xusan "About phone";
e) Xullo "xulasho horumariyaha" oo u rogo "On";
f) Hoos u jiido illaa "USB Debugging" oo awood u siiso;
g) Ku xir qalabka kombiyuutarka adoo adeegsanaya USB-ga nooca-C-ga ah. Waxaad arki kartaa faraha oo xaqiijinaya markii ugu horeysay, hubi oo ogolow.
1.3 Khariidaynta Qaab-dhismeedka Hore
Ka fur qalabka "My Computer" shaashadda, CUT faylasha qaabeynta qaab duug ah haddii ay jiraan - faylasha qaabeynta qaab duugga ah waa inay ku jiraan dariiqa "S700A \_ Keydka Gudaha \_ CONTACTLIST.xls" iyo "S700A \_ Keydka Gudaha \_ PTT_CHANNEL_LIST_DATA.xls" , waad ku keydin kartaa 2-daan feylal kumbiyuutarka.
1.4 Ku rakib Nooca Cusub APK
Nuqul "DMR_V014_sign.apk" una dhig "S700A \_ Kaydinta Gudaha" oo rakibo, markaa barnaamij ayaan barnaamij ka samayn karnaa.
2.1 Xullo Qalab
Guud ahaan, BPS waxay ogaan doonaan oo ay dooran doonaan qalab si otomaatig ah markaad u furayso sida ka hooseysa shaashadda. Laakiin fadlan la soco in DDB aysan taageerin aaladaha kala duwan hada.
Xalka BPS ma ogaan karo qalab, waxaa laga yaabaa inaadan u baahnayn inaad isku daydo talaabo kasta:
a) Hubso in "USB Debugging" karti loo siiyay;
b) Fiilo-jiid fiilada USB-ga dhowr jeer;
c) Dib u cusbooneysii qalabkaaga;
d) Dib u bilaw kumbuyuutarkaaga;
e) Ku rakib "adbdriver.zip" kombiyuutarkaaga;
f) Ugu dambeyn nuqul "adb_usb.ini" una guuri "C: \_ Users \_ Your Name \_ .android \_".
2.2 Akhriso Customization
Dhagsii badhanka cagaaran si aad uga akhrido qalabaynta, waxaad arki doontaa "Model Number" iyo "Number Serial" ayaa lagu buuxiyaa sida hoos ku qoran.
Marka ugu horeysa waxaa laga yaabaa inaad hesho qalad aqrin sababtoo ah majiraan qalab cusub oo qalab ah, iskuday inaad qorto markaa
aqriso waa caadi
2.3 Qor Customization
Habee dhammaan xuduudaha, ka dibna riix badhanka cas si aad ugu qorto qalabaynta qalabkaaga.
Wax kala iibsiga wuu diiday
Waxaad leedahay raadiyo aad u tiro badan. Lacag ka sii fiican ayaa lagu bixiyaa! Ama kaliya fursad inaad ku guuleysato raadiyaha xorta ah!
Sida loo qaabeeyo Boxchip S700A Boxchip hawlgalka DMR
Tilmaamahan degdega ah wuxuu kuu sharxi doonaa sida loogu barnaamijyo mawjadaha DMR ee loo yaqaan 'Boxchip S700A'
Marka hore, fadlan akhriS700A DMR Buugga Isticmaalka”In la ogaado sida loo dejiyo soo noqnoqoshada DMR.
Kadib, ku dar macluumaadka saxda ah Liistada Channelka PTT & liistada xiriirka ayaa gogol xaaraya sida ku xusan buuga isticmaalaha,
Ugu dambeyntiina, labadan xaashi u soo rar idaacaddaada.
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan raadiyahan weyn
Ayaa laga heli karaa IRN?
IRN waa qaab xiiso leh oo loogu talagalay isgaarsiinta raadiyaha 2-gees ah. Waqti kasta, waad arki kartaa calaamadaha wicitaannada ee khadka tooska ah ugu jira QSO wanaagsan. Hubi liistada halkan.
Inrico TM-8 Fiqi Maqal Fiican - qaab cusub
Halkan waa a wax ka beddel fiican taasi waxay hagaajineysaa 'Inrico TM-8 Audio' ee cutubyo duug ah. Maqaalka waxaa qoray M0FXB.
Wax ku biirinta Steve Jobs ee Idaacadaha Shabakadaha
Ahaa! Waxaan u maleynayay in cinwaankaas uu dareenkaaga soo jiidan karo!
Ku laabo mustaqbalka - qaabkii 2007
Maskaxdaada dib ugu celi, hadaad rabto, bilawga iphone kii ugu horeeyay 2007. Weli waad ku daawan kartaa YouTube-ka.
Ustaadkii soo bandhigida ee ahaa Steve Steve Jobs wuxuu markiisii ​​hore soo saaray qalabkan dhabta ah ee kacaanka isaga oo isku dayaya inuu dhagar qabayaashiisa khiyaaneeyo
Wuxuu isku dayay inuu ka dhaadhiciyo inay aaminaan in Apple dhab ahaantii bilaabayso saddex kala gooni ah qalabka.
Ku celcelintooda ayuu ku celceliyay - "iPod, Telefoon, Qalabka Isgaadhsiinta Internetka - iPod, Telefoon, Qalabka Isgaadhsiinta Internetka".
Ugu dambeyntii dhagaystayaashu waxay suuf ka dhigeen xaqiiqda ah inuu iyaga la ciyaarayo, isagoo tixraacaya hal qalab waayo, oo dhan isticmaalkan.
Farshaxanada tiknoolajiyada waxay ugu yeeraan "isku-xirnaanta" iyo iPhone-ka ayaa muran la'aan astaanta u ah dhammaan aaladaha isku-dhafan.
Wada-tashiga ayaa halkan jooga!
Oo halkan waxaan joognaa 11 sano oo midnimadu si fiican oo run ah ayaan halkan u joognaa!
Looma baahna TV - qalabka mobilada ee taas
Looma baahna aalad ciyaareysa - qalabka mobilada taas
Looma baahna PC - qalabka mobilada ee taas
Looma baahna raadiye - qalab mobilada loogu talagalay taas
La xiriir saaxiibbadaa?
Looma baahna farriin qoraal ah - baraha bulshada ee aaladda moobaylka ah taas
Wicitaan Video ah?
Looma baahna kombuyuutar - oo ku qulqulaya qalabka mobilada taas.
Qaadashada sawir tayo leh?
Looma baahna kamarad - qalabka mobilada ee taas
Looma baahna in taas laga sugo TV-ga - waxaa jira barnaamij ku jira aaladda moobaylka
Wararkii ugu dambeeyay?
Fartaada laga helo ilo kala duwan oo ku saabsan qalabka mobilada, dabcan!
Digniin deg deg ah oo ku saabsan yoolalka ugu dambeeyay ee kooxdaada?
Wax ka ifaya aaladdaada gacanta daqiiqado gudahood marka la dhaliyo
Waan sii wadi karaa waadna ogtahay in waxa kor ku xusan ay run ku yihiin khibradaada.
Raadiyahana waa laga dhaafay tan? Malaha maya!
Ma jiraa qof waligii runti rumeystay in isgaarsiinta PTT ee nooca ay adeegsadaan hiwaayadda raadiyeyaashu ay sii jiri doonto ka baxsan adduunyada laysugu yimid?
Kordhinta barnaamijyada sida Zello iyo IRN ee Teamspeak waa uun isbadal dabiici ah oo dabiici ah waxa ka dhacaya adduunka intiisa kale sanado badan. Dadka hiwaayadda u leh hiwaayadda ayaa la dagaallami kara, laakiin dhab ahaan, horay ayey u dhacday already
Rise of Raadiyeyaasha Shabakadaha
Kordhinta ifafaalaha Idaacadaha Shabakadda ayaa hadda umuuqda mid aan la joojin karin.
Qeybta 'Channels' ee 'Zello' oo loo yaqaan "Idaacadaha Shabakadaha" (kuwa ay leeyihiin G1YPQ) waxay ka badan yihiin macaamiisha 4000, in ka badan 2000 adeegsadeyaal ah oo lagu kalsoon yahay oo dhif iyo xasillooni la'aan tahay.
Waxay maalintii oo dhan la ciir ciireysaa raadiyeyaasha xiisaha leh, haamyada iyo isticmaaleyaasha aan shatiga lahayn, oo ka kala socda adduunka ku hadla af Ingiriisiga, dhammaantoodna waxay ku wada xiriiraan siyaabo u eg maalmihii hore ee Top Band iyo 2 mitir.
Waa jawi si wanaagsan loo habeeyay sidoo kale, ammaan sidaas darteed iyo meel fiican oo aad ku qaadatid tallaabooyinkaaga ugu horreeya hiwaayad cusub.
Ama waxaa laga yaabaa inaad tahay meel aad "ku calali karto baruurta" dadka kale ee jecel fikirka raadiyaha, meel aad ugala hadasho horumarkaaga barashada CW ama dhibaatooyinka aad ku garaacayso sameynta anteenada cusub, ama laga yaabee inaad xitaa ka hesho dariiqaaga Android OS ee alaabada qarsoon ee ku jirta barnaamijka Zello.
Ma isku dayday?
Hadaadan wali isku dayin, maxaad sugeysaa?
Haddii Steve Jobs uu weli dhulka joogi lahaa, waxaan hubaa inuu aad ugu faani lahaa "adduunyadiisa isu yimid" - oo yaa garanaya, waxaa laga yaabaa inuu xitaa "hawada ku jiray" Raadiyeyaasha Shabakadda inteena kale!
The S700A waa raadiyaha isugeynaya ee android kaas oo u oggolaanaya 100% caymis: iyadoo la adeegsanayo 3G / 4G / LTE / WiFi / VHF ama analogga UHF FM iyo DMR Tier II. Marwalba waad isku xirnaan doontaa.
Idaacadaha DMR (11)
Idaacadaha Shabakada Mobilada (8)
Idaacadaha Shabakadaha (33)
Boorsooyinka Raadinta Xeeladeed
Idaacadaha Shabakada Mobilada
Ogeysiis macaamiishayda ah
Maalin dhaweyd waxaan raadinayay khadka tooska ah haddii ay jirto farsamo kasta oo looga baxo culeyska fekerka marka ay khalad ku dhacaan macmiilka. Sida xirmo dib u dhac ku yimid ama aa alaab-qeybiye oo qaldamay oo u diray cinwaanka qaldan. Waxaan doonayay inaan awoodo inaan sariirta aado habeenkii oo aan seexan karo anigoon ka fakarin Jason oo sugaya 3-da idaacadood ee aan wali helin ama Tomas oo helay cillad T298s. Waxaan kaliya rabay inaan ka tago dhibaatooyinka "dhibaatooyinkooda" oo aan ku raaxeysto waqtigeyga firaaqada ah anigoon ka fikirin arrimaha "kuwooda". Afterall, wax walba waa la xallin karaa. Waxaad qoreysaa emayl raali gelin ah, iskuday inaad diyaarsato shixnad cusub, bedel cutub halkan iyo halkaas, waxaad soosaaraysaa lacag celin yar wax walbana sifiican ayey u socdaan.
Laakiin markaa waxaan xaqiiqsaday inay tahay inaan marin dariiqaas. Aad bay khatar u tahay haddaan noqdo "ganacsade" ganacsade. Naxariistaan ​​joogtada ah ee macaamiisha ayaa igu qeexaysa xirfadle iyo milkiile ganacsi. Waa hamiday shaqadan oo isu rogaysa hiwaayad. Haddii aanan dareemin xanuunka ay dareemayaan macaamiishaydu markay wax qaldamaan, markaa ganacsigeygu waligiis ma guuleysan doono.
Go'aankani wuxuu i tusayaa inaan si dhab ah ula macaamilo macaamiisha, oo aan u geeyo dhammaan shucuurteyda dhabta ah dhammaan howlaheyga ganacsi waxay ugu dambeyntii ka dhigeysaa qof walba inuu dareemo waxoogaa jacayl ah marka ay la macaamilayaan ganacsigeyga.
Taas awgeed, waan ku mahadnaqayaa dhammaantiin marwalbana waan ku mahadnaqayaa kalsoonida!
Haddii aad ku hesho farxad raadiyeyaasha aad ila soo iibsatay, markaa waad iska dhigatay maalintayda!
Inrico T320 4G / Wifi (Android quful)
Sure F22 Plus 3G / WIFI (Android quful)
Makarafoonka gacanta ku xiran ee loogu talagalay Radio-Tone RT4
Inrico T298s 3G / Wifi UHF Radio 400-470 MHz (Android quful) EU / UK / Australia
Ed Koorengevel on Desktop xeedho / Suction Cup Mount for RT4
Andrew Nagle on Inrico TM-9 4G / WiFi IRN Shabakadda Moobilka Raadiyaha
mb60304 on Codka Raadiyaha RT4 4G / LTE WiFi + Microphone Gacmeed + Batariga Dheeraadka ah
Dukaanka rasmiga ee RFinder Dukaanka rasmiga ah ee Inrico
Gaarsiinta adduunka oo dhan
Maahan kuwa hiwaayadda leh
PTT4U waa adeeg raadiye shabakad casri ah oo xirfadlayaal ah. Iyagoo ku tiirsan ishaarada GSM, idaacadaheena waxay awoodi doonaan inay lahadlaan midba midka kale iyadoon xadeyn kaladuwan lahayn. Idaacad walba waxay ku shaqeysaa kaarka SIM (kuma jiraan) waxayna isticmaashaa GSM / 3G / 4G noocyada qaarna xitaa waxay la shaqeeyaan signalada WiFi. Tan macnaheedu waa uma baahnid inaad qarash gareyso hanti badan qalabka qaaliga ah ee raadiyaha, soo noqnoqdayaasha, anteenooyinkooda ama guryaha kirada ah. Dhammaan qaab-dhismeedka infra-network waxaa bixiya side GSM. Wicitaano gaar ah iyo kooxeed ayaa la heli karaa. Xubnaha kooxdaadu waxay joogi karaan dalal kala duwan oo wali waa la gaari karaa. Isticmaale kastaa wuu iska hubin karaa midba midka kale meesha uu ku sugan yahay (iyadoo lagu saleynayo astaanta ay leeyihiin), wuxuu u diri karaa farriimo iyo digniino SOS ah. Waxa kaliya ee aad u baahan tahay inaad sameyso, waa inaad iibsato raadiyeyaasha shabakadeena, iyadoo kuxiran baahiyahaaga, ku dar kaarka aad doorbideyso kaarka SIM-yada ee raadiyeyaasha (qorshe bille ah oo 500MB ah ayaa kugu filnaan doona) rukumo sanadkii PTT4U adeegga. Waxaad u baahan doontaa hal $ $ 49 oo rukumo ah idaacad kasta. Waana taas! Madax xanuun dambe
10 subaxnimo-5 galabnimo GMT
Lõõtsa tn 5 // Seppaja tn 4
Network 2021 Network-radios.com dhammaan xuquuqda ayaa la keydiyay